लकडाउनः कोहलपुर र कला (लेख)–विक्रम शिशिर - EAAWAJ (इ-आवाज)
प्रकृति, प्राणी, विपत्ति सधै मेल खाँदैनन् र पनि यिनीहरू अगल बगलमा नै रहन्छन् । जब–जब विपत्ति बिनाशकारी हुन्छ तबतब प्राणीहरू बिचलित हुन्छन् र प्राणी मध्ये सबैभन्दा आतंकित बन्छ मानव जाति । किनकी यहाँ मानिसले बोल्न सक्ने, बुझ्न सक्ने, सोच्न सक्ने र समाधान गर्न सक्ने क्षमता राख्छन् । त्यसैले हर प्राकृतिक बिनाश होस् वा मानव निर्मित बिनाशहरू सफलतापूर्वक समाधान गरेका छन् ।
कतिपय कुरामा पूर्वानुमान गरी मानव सुरक्षा सतर्कता अपनाउन सचेत गराएको सन्दर्भलाई आत्मसात् गर्न सकिन्छ । हालको परिप्रेक्षमा कोरोना (कोविड–१९) ले निम्त्याएको महामारीले विश्वव्यापी रूपमा आतंक मच्चाएको छ । आर्थिक तथा जनस्वास्थ्यमा हरेक देश अछुतो छैनन् । यो प्रभाव हाम्रो देशमा पनि दिनानुदिन बढ्दो छ । हरेक नेपालीको दैनिकी साथै समाज, समुदाय, परिवारलाई प्रभावित गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन, विकास, मनोरञ्जन, कला, साहित्य, संगीत लगायत अत्यावश्यक कुराहरू ठप्प छन् । सरकारले जारी गरेको नागरिक कर्फ्यु प्रभावकारी हुन नसक्नु, नागरिक चेतना र स्थानीय निकाय र प्रसाशनले स्थलगत, वस्तुगत निरक्षण गर्न नसक्नु, हरेक काम कार्वाहिका लागि केन्द्रीय निर्णयको अपेक्षा गर्नुको बाध्यात्मक अवस्थाले लकडाउनको सबैभन्दा प्रभाव निम्न वर्ग, सोझा नागरिक, अशक्त, वृद्धवृद्धा, बालबालिका तथा महिलाहरूमा परेको छ । बन्दाबन्दिले खुम्चिनु परेको साँघुरो दायराभित्र कतिपय सृजनात्मक कामहरू भैरहेका छन् । चाहे शिक्षामा होस् या स्वास्थ्य, उत्पादन, बिज्ञान, कृषि, कला, साहित्य, संगीत, नाट्य विधाहरूमा रचनात्मक काम भएको पाईन्छ । यस्ता खाले काममा बन्दाबन्दीलाई अवरमा परिणत गरेका छन् कतिपय सृजनधर्मिहरूले ।
हाम्रो पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठान कोहलपुर बाँकेको कला विभाग, संस्थाका अन्य विभागझैं कोहलपुर लगायत आसपासका क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम सहित आफूलाई उपस्थित गराईसकेको छ । वि.सं. २०७३ सालमा कला विभाग गठन गरिएपछि कला विभागले तत्कालिनन मध्य तथा सुदूरपश्चिम स्तरीय अवधि लोक कला र पछि ५,६ र ७ नं. प्रदेश स्तरीय पोस्टर कला, कार्यशाला गोष्ठी, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आयोजना र कला विभागको संयोजकत्वमा सम्पन्न गरिसकेको छ । लोक आधुनिक तथा सृजनात्मक कलामा अभ्यास कला विभागले विभिन्न समयमा कार्यशाला गोष्ठी तथा प्रदर्शनी गरेको छ । पछिल्लो समयमा हाम्रो पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठानको कला विभागले कोहलपुरमा कला भन्ने नाराका साथ कोहलपुरका विभिन्न ठाउँ लगायत कर्णाली प्रदेशको भेरीगंगा नगरपालिकामा समेत गरि कोहलपुरमा कलाको आठौं शृङ्खला सम्पन्न गरिसकेको छ । कला विभागका सदस्य लगायत अन्य आसपासका कलाकारहरूले लकडाउनलाई संकटसँग एउटा अवसर पनि ल्यायको ठानेका छन् ।
आफ्नो ईच्छा हुँदाहुँदै पनि कारणबस प्रकट गराउन नसकेका सृजना बन्दाबन्दिको समय विशेष बनेको छ । कला विभाग सदस्य आयुष्मा ढकाल भन्छिन,–‘जब ब्रस लियर रंगसँग भावना रंगिन्छ समय बितेको थाहै पाउदिनँ ।’ प्राय लोक तथा दृश्य कला रचनामा रमाउने आयुष्मा थप्छिन्क,–‘कल्पनाको गगनभन्दा ठूलो सिङ्गो आकाश पनि छैन । जब कल्पना गरिन्छ सारा ब्राह्मण्ड सृजनाको दायरामा साँघुरो हुन्छ ।’ अर्का सदस्य कमल खत्री दृश्य तथा आधुनिक चित्रकलामा रंग खेलाउँछन् । आफूमा क्षमता र रूचि हुँदाहुँदै पनि चाहे जति सृजना गरेको छैन, यद्यपी बन्दाबन्दीमा चाहेजस्तो मौका जुरेको बताउँछन् उनी । अंशु र वंशु चन्द दिदीबहिनी हुन्, दुबैले लकडाउनलाई अवसरको रूपमा हेरेका छन् । प्रायः मुहार र दृश्य चित्र बनाउने दुई बहिनी मध्ये विशेष रूपमा अंशु चन्द सक्रिय देखिन्छन् । प्रायजसो स्केच, वस्तु, पर्यावरण दृश्यका चित्रमा रंग भर्न रूचाउँछिन् । अंशु विभागको सदस्य पनि हुन् ।
नेपालगन्ज घर भएका सागर क्षेत्रीलाई यो समयले नराम्ररी थिल्थिलो पारेको परिवेश भए पनि सृजना गर्नेलाई खासै चिन्ताजनक बनाएको छैन । उनी भन्छन्, –‘अधुरो पेन्टिङ पुरा गर्ने अवसर हो ।’ उनले अधुरै छोडेका पेन्टिङ पुरा गरेर पनि केही नयाँ गरेका छन् । लकडाउनको समयमा पनि पेन्टिङ बेच्ने कलाकार सागर कला विभागका सदस्य हुन् ।
खुश्बु बिष्ट विभागको अर्को सदस्य हुन् । उनले बन्दाबन्दिले निम्त्याएको विषम् परिस्थितिमा बिचलित नभई सृजनात्मक मनस्थिति बनायो भने कोरोना बिरूद्ध लड्ने क्षमता बढ्ने
जिकिर गरिन् । ललितकला पाठशाला खुलेपछि सिकेका तमाम विधि र विधागत अध्ययनलाई निरन्तर दिन बन्दाबन्दीले समय जुराएको छ । त्यँहा सिकेका ज्ञानहरू निरन्तर अभ्यासमा लागू गरिरहेको बताउँछिन् ललितकला पाठशाला कोहलपुर र आसपासका ईच्छुक कलाकारको मार्गदर्शक बनेको छ ।
स्कुल छुट्टिपछि लकडाउनको कडाइ हुन सक्ने सम्भावनाले हतार–हतार कोहलपुरबाट कालिमाटी सल्यान जानु पर्ने हुँदा प्रयाप्त सामाग्री लैजान नपाएर पछुतो छ उर्मिला थापालाई । उनले प्रायः आकर्षक दृश्य चित्रहरू बनाउछिन् । कोहलपुर भैदिएको भए यतिखेर धेरै सृजना गर्ने अवसर थियो । उनी भन्छिन्, प्रयाप्त सामाग्री नहुँदा आफू ग्राफिक डिजाइन सिकिरहेको बताउँछिन् र पनि आफूसँग भएको सामाग्रीबाट केही पेन्टिङ बनाएको छु । उर्मिला विभागको सदस्य हुन् ।
बैजनाथ गाउँपालिका बाँकेका नवराज राणा यतिबेला सिर्जनामै व्यस्त छन् । केही वाल, केही क्यानभास र पेपरमा आफ्नो सिर्जनात्मक चेतना भरेका छन् । समय चिन्ताजनक छ, आवतजावत छैन मानिसमा त्रासको वातावरण हुँदाहुँदै पनि मैले केही पेन्टिङ गरेको छु । पेन्टिङ गर्ने हुटहुटी बन्दाबन्दीले पुरा गरेको बताउँछिन विभागको सदस्य दिब्या गौतम । चित्रसँगै क्राफ्टमा रुचि छ
प्राश्ना दियालीको । विशेषगरी स्टोन आर्टमा आफ्नो परिचय बनाई सकेकी प्राश्ना आशालाग्दो कलाकार हुन् । यतिबेला उनी स्टोन कलामा व्यस्त छिन् ।
समय कष्टकर छ । हरपल मान्छेलाई झन कठोर बनाएको छ । मृत्यु अवश्य हुनेछ । त्यसैले हरेक दिन समय र जीवनलाई अनुभव गर, अनुभव मै रमाउ भनेर सबैलाई भन्दै आएको छु । मृत्यु एकचोटि हो र हरेक बिहान् एक नयाँ जीवन नयाँ अनुभव लिने अवसर हो तर अहिले म हरेक विहान् त्रासमा उठ्छु र मृत्युलाई अँगालो मारेर सुत्छु, साँच्चिकै समय एकदमै कठिन भएको छ । त्रास, डर, आँसु, खुसी एउटै अनुहारमा देखिन्छ । एक छुट्टै अनुभवको अवसर पाईएको छ । यही अवसरमा आफ्ना भावना क्यानभासमा उतार्नु नै मेरो दिनचर्या भएको छ ।
यस क्षेत्रबाट कला मार्फत राष्ट्रियस्तरसम्म आफूलाई पिरिचित गराएका छन् कला विभागको सचिव कलाकार अश्विन कोईराला । विशेषगरी मुहार र आधुनिक चित्रकलामा निरन्तरता दिरहेका छन् उनले ।
बन्दाबन्दीमा यस क्षेत्रका बालबालिकालाई विशेष रूपले अवसर जुराएको छ । अभिभावकले पनि आफ्ना बालबालिकाको अतिरिक्त क्षमताको अध्ययनमा जोड दिएको पाईन्छ । उदाहरणका लागि अनुश्री ढकाल, खगेन्द्र शाही, निश्चला गैरे, आर्या ढकाल, अभि चन्द, आयुषा मण्डल, अनुष्का ढकाल, रोहित थारू, राधिका शाही, रिताष्मा के.सी., स्वरूप पौडेल, आयुष्मा आचार्य, वैभव बिक्रम चन्द, वर्षा थापा, सौगात साउत, धनन्जय चौधरी, पवित्र थापा, श्रवण चौधरी लगायत यस क्षेत्रमा कलामा तल्लिन भएर लाग्ने प्रतिनिधि नाम हुन् ।
स्वरुप पौडेलले आफ्नो बुवा लक्ष्मण पौडेललाई जन्मदिनको उपहार स्वरुप बुवाको मुहार तस्बिर बनाएका थिए । यतिबेला स्कुल जानु पर्ने नभएकाले घरमा चित्रकला अभ्यास गराईएको छ छोरा वैभव बिक्रम चन्दलाई । उनलाई साईकल सिरिज गराएका छौं । किनकी साईकलमा विभिन्न ज्यामितिय सबै कोण एकै वस्तुमा लागु हुने हुनाले पनि यसलाई निरन्तरता दिएका छौं ।
साथै घरमा प्राय चित्रका काम भैरहने हुँदा मेरो जीवन साथी उषा सुवेदी पनि चित्रहरूमा लगाव बढेको छ । बन्दाबन्दीमा बेकाम बस्नुभन्दा सृजनात्मक हुन सिकायो लकडाउनले । उनलाई चराको सिरिज जिम्मा दिईएको छ । अठार वटा पेन्टिङमा चराहरूको रूप वर्ण र व्यवहार उतारेकी छिन् । कलाको संगतले चित्र कोर्न सिकाएको र यतिका वर्ष नसिकेको बन्दाबन्दीले अवसर जुरायो भन्दै दंग पर्छिन् उनी । आफ्नो पेन्टिङ हेरेर, सिरिजमा काम गराईएको यस मानेमा हो कि, कोरोना कहर र जनजीवन सामान्य भएपछि वैभवको साईकल सिरिज र उषाको वर्ड सिरिजको एग्जिवेसन गरिदिन सकौं । लकडाउनबाट सबै प्रभावित भएकोले आफू पनि अछुतो रहन सकिएन । यो महामारीबाट आफूले धेरै कुराको ज्ञान, अनुभव र चिन्तन् गर्ने मौका मिलेको छ र आफूले जानेको सीपलाई निरन्तरता दिन पाएको उनी बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, क्राफ्ट मेरो पेशासँग जोडिएकोले मेरो पहिचान सँगसँगै बानी पनि हो । क्राफ्टमा विशेष अध्ययन र उत्पादनमा सक्रिय र धेरैलाई हेन्डिक्राफ्ट सिकाई सकेकी सबैको प्रिय क्राफ्ट टिचर सीता पौडेल कोहलपुर कृषि चोकस्थित प्याडाईज मन्टेश्वरी तथा श्रोत केन्द्रको संचालक हुन् ।
नेपालगन्जका वरिष्ठ कलाकारद्वय श्यामानन्द सिंह र बिष्णु कुम्हाल पनि सृजनामै सक्रिय छन् । विशेषगरि दुवै जना अवधि कलामै सृजना गर्छन् तर दुबैमा भिन्नता छ । श्यामानन्द अवधि लोककलासँगै क्राफ्टमा परिचित छन् र बिष्णु कुम्हाल अवधिकलासँगै समाजसेवी हुन् । दुबै जना यतिबेला लोककला कै सृजना गरिरहेका छन् । खजुरा गाउँपलिका खजुरा बजारका मास्टर अफ फाइन आर्ट गरिसकेका डि.बि. भण्डारी लकडाउनमा आफ्नो कलाकारितामा पुनः अभ्यास भैरहेको बताए । कोरोना कहर नागरिक जनजीवनमा सृजना गरिरहेका छन् ।
अर्का मास्टर अफ फाइन आर्ट गरेका सुरज सुवेदी पनि पुनः अभ्यास गरिरहेका छन् । बन्दाबन्दीमा आफूले मुहार चित्रमा केन्द्रित रहेर सिर्जना गरिरहेका कोहलपुर निवासि सुरज ललितकला पाठशालाका मुख्य प्रशिक्षक हुन् ।
बन्दाबन्दीले काठमाडौंदेखि मोफसलका सृजनधर्मिहरूको अवसर बनेको छ । भनिन्छ हरेक बिपत्तिले अवसर लिएर आउँछ । अविभावक र बालबच्चाप्रति सामिप्यता, परिवारिक मेलमिलाप, सामाजिक दायित्व, घरगोठ, शृङ्गार, सरसफाई, करेसाखेती, बाँझाृे बारी खनजोत, आत्मसमिक्षा, आत्मासुद्धि, नियमित व्यायम, प्रणायाम, चिन्तन,अध्ययन, लेखन जस्ता कुरामा अवसर ल्यायको ठान्छन् सृजनधर्मिहरू।
म आफैले पनि बन्दाबन्दीकै सेरोफेरोमा धेरै सिर्जना गर्न भ्याएको छु । लकडाउन अगाडि लिएको अर्डर केही बनिसकेका थिए । वि.सं. २०७६ चैत ११ गतेदेखि देशमा नागरिक कर्फ्यु लागेपछि एक प्रतिष्ठित होटलको अर्डरको कामको दाम अनिश्चित भएता पनि मैले चित्रकारको धर्म छोडेको छैन । होटलको अर्डरका २० थान पेन्टिङ सहित अन्य ७ वटामा काम भ्याएको छु । ५ वटा पुस्तकको आवरण तयार गरें । साहित्यकार महानन्द ढकालको मुक्तक संग्रह र अर्को एक मुक्तक संग्रहका मुक्तकहरूमा करिब दुई सयको हाराहारीमा भाव चित्रहरू तयार गरिसकेको छु । लकडाउनमा बाहिरी जगत प्रभावित भए पनि मेरो सृजना चलिरहेको छ र चलिरहनेछ, निरन्तर…।
प्रमुख, कला विभाग, हाम्रो पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठान, कोहलपुर
निर्देशक, ललितकला पाठशाला कोहलपुर, बाँके
← निरन्जना चन्द ‘निरु’का पाँच साइनो
बाँकेमा निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्नेहरु प्रहरीको नियन्त्रणमा →